Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Hotely Ramada Marshall izao eo ambany fitantanana vaovao
Ny Ramada, miorina ao Marshall eo amin'ny fihaonan'ireo làlambe 19 sy 23, akaikin'ny Southwest Minnesota State University, dia eo ambany fitantanana vaovao. Ny Ramada Marshall dia mijanona ho foto-tsakafo ao an-toerana ary manome ny vahiny sy ny olona ivelan'ny tanàna toerana misy vidiny lafo amin'ny vidin-javatra rehetra ilaina amin'ny hetsika sy ny filan'ny trano rehetra.
Tamin'ny volana febroary 2018, mpiara-miasa miasa iray ao amin'ny GF Management, orinasam-pandraharahana hotely lehibe sy orinasa mpitantana, dia nanambara fa noraisin'izy ireo tamim-pireharehana ny efitrano 100 misy an'i Ramada Marshall, miorina eo amin'ny efatra kilaometatra miala ny seranam-piaramanidina rezionaly Minnesota Southwest, ao anaty portfolio-ny fitantanana. Manam-pahaizana manokana amin'ny trano fandraisam-bahiny, toeram-pialofana, taranja golf ary fananana hafa mifandraika amin'ny fandraisam-bahiny ny GF Management, ary nivoady fa tsy hitazona fotsiny, fa manatsara ny serivisy, ny fotodrafitrasa ary ny fomba fijery ilay trano.
"Faly be izahay manampy an'i The Ramada Marshall amin'ny portfolio momban'ny fananana tantaninay," hoy i Jason Everson, filoha lefitry ny Operations for GF Management. "Matoky izahay fa ny fampiharana ny rafi-pitantanana voaporofo dia hanandratra ity hotely ity ho lasa mpitarika eo amin'ny tsena."
Ny Ramada Marshall dia mety minitra vitsy monja miala an'i Downtown Marshall ary manolotra fidirana mora amin'ny hetsika sy fisarihana maro toa ny Marshall Golf Club, Lyon County Historical Museum ary Marshall Aquatic Center; Ireo vahiny dia hahita ihany koa ny toerana azo andehanana amin'ny hotely hitsidihana ny oniversiten'i Southwest Minnesota State. Ny vahiny manidina na mivoaka ny seranam-piaramanidina rezionaly Minnesota Atsimo Andrefana dia afaka manararaotra ny fivelaran'ny hotely, manolotra tolotra fiderana mankany amin'ny seranam-piaramanidina. Ankoatr'izay, ny Ramada Marshall dia manome fidirana mora amin'ny vahiny amin'ny làlambe marobe sy ny biraon'ny orinasa eo an-toerana toa ny Runnings, Schwan's Ice Cream ary Turkey Valley Farms.
Mirehareha amin'ny trano fandraisam-bahiny maro ny trano fandraisam-bahiny, ao anatin'izany ny dobo mafana sy tafio-drivotra mafana ao an-trano, ahafahan'ny vahiny miala sasatra aorian'ny andro mamokatra. Ireo izay te hijanona ho salama dia afaka mankafy fampihetseham-batana amin'ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny tsara indrindra eto an-tsena. Ny trano dia trano fisakafoanana feno ihany koa, Shays Restaurant and Lounge, izay manolotra sakafo matsiro sy sakafo matsiro amin'ny toerana mahazatra.
Ny Ramada Marshall dia manome habaka maherin'ny 3,000 metatra toradroa azo ampiasaina, mety amin'ny hetsika ara-tsosialy, orinasa ary fampakaram-bady, mahazaka olona 400. Ny mpitsidika hetsika dia afaka mankafy ny vidiny mandritra ny alina miaraka amina vondrona izay miaro ny sakana amin'ny trano alohan'ny fotoana ijanonany.
"Tsy afaka nientanentana bebe kokoa momba ny fidiranay amin'ity trano ity izahay," hoy hatrany i Jason. “Tena reharehanay ny serivisy omenay ny vahininay, fa ny vokatra anehoana azy. Matoky izahay fa ho faly ireo vahiny amin'ny fanovana entinay ho amin'ity hotely niorina ity. ”
Ny GF Management dia mazoto hitondra fiainana vaovao amin'ity trano fandraisam-bahiny ity amin'ny toerana tokana izay azon'i Marshall omena. Na mikasa ny hanao fialan-tsasatra ho an'ny mpianakavy, fitsangatsanganana na fanasana amin'ny mariazy ny vahiny, dia fampitandremana tsy tambo isaina ary serivisy mahafinaritra no miandry azy ireo ao amin'ny Ramada Marshall.
Fitsangatsanganana iraisam-pirenena mankany Etazonia: fanitarana 99 volana mahitsy